ဂေဇက်ရွာ အရေးတော်ပုံ ၂= (လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက်ရွာ အရေးတော်ပုံ ၂= (လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး)
ဂေဇက်ရွာ အရေးတော်ပုံ ၂= (လူမျိုးရေးနဲ့ ဘာသာရေး)
Posted by ဇောက် ထိုး on Jun 6, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးများခင်ဗျာ.. ဘာသာဆိုတာ အလင်းရောင် ဆိုတဲ့အတိုင်း.. လူသားတွေကို အသိညာဏ် အလင်းရောင်နဲ့ လမ်းပြပေးတာကို ဘာသာလို့ကျွန်တော် မောင်ပေနားလည်ထားပါတယ်။
ဥပမာ ဆိုရသော်..နိုင်ငံကြီးက လှေကြီးဆိုရင်.. ပြည်သူတွေက လှေထိုးသားတွေပါ။ ဘာသာ တရားက လှေပေါ်ကလူတွေ ရောက်လိုရာ တည့်တည့်မတ်မတ်ရောက်ဖို့ ထိန်းကျောင်းပေးတဲ့ “ ပဲ့ ”လေးပါ။ ပဲ့ ဟာ လှေကိုပြေးအောင်လဲ မလှော်ပါဘူး။ ရေကိုယက်တဲ့ တက်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ပဲ့ဟာ လှေကိုလမ်းဖြောင့်ပေးတဲ့အရာပါ။
နောက်ကျွန်တော်တို့ တတွေဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိဘဆရာသမား တွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်သွင်းမှုကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာအပေါ်မှာပဲ ယုံကြည်မှုတွေ ပြင်းထန်းပြီး အခြားဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာတော့ မယုံကြည်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှု ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုပဲ အမှန် သမ္မာဒိဋ္ဌိ။ ကိုယ်မယုံကြည်တဲ့ အခြားဘာသာအယူအဆတွေကြတော့ အမှား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။ လို့လုပ်ကြပါတယ်။
နောက်ပြီး အားလုံးဟာ ယုံကြည်မှုကို အခြေခံထားကြတော့ အမှားအမှန်ကို လက်တွေ့ပြ ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်လဲ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။
ခရစ်ယာန်တွေ. ထာဝရဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြ.. အစ္စလာမ်တွေက တွေကလဲ အလ္လာအရှင်ကို ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကောင်ကင်းဘုံကို ယုံကြည်ကြပေမယ့် ဗုဒ္ဒဘာသာတွေက မယုံကြည်ကြပြန်ပါဘူး။ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေက နတ်ပြည် နိဗာန် ကိုယုံကြည်ကြပေမယ့် ခရစ်ယာန် အစ္စလာန်တွေ မယုံကြည်ကြပါဘူး။ ဟိန္ဒူတွေက ဗြဟ္မာကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့မှုကို ယုံကြည်ကြပေမယ့် ကျန်ဘာသာဝင်တွေက မယုံကြပြန်ပါဘူး။ ယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လေတော့ ဘယ်သူ့ဘယ်သူ့မှလဲ လက်တွေ့ သက်သေမပြနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီတော့လဲ ညိနှိုင်းမရကြပဲ.. ပဋိပက္ခလေးတွေနဲ့ မကင်းကြပြန်ပါဘူး။ ပဋိပက္ခနဲ့ မကင်းသမျှ လူ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ လုံးဝမရနိုင်တဲ့ အရာပါ။ ငြိမ်းချမ်းမှု ဆိုတာ ပဋိပက္ခရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ ကျွန်တော်မောင်ပေ ခံယူပါတယ်ခင်ဗျာ။
ယုံကြည်မှုအပေါ် အခြေခံတည်ဆောက်ထားကြတဲ့ ဘာသာရေးတွေဟာ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုတွေ ခိုင်မာဖို့အတွက်.. ကျမ်းစာတွေကို အခြေခံကြပါတယ်။ ကျမ်းစာတွေကို သက်သေပြုကြပါတယ်။ ကျမ်းစာတွေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီကျမ်းစာတွေ အခြေခံရာကနေ ခိုင်မာဖို့အထိ ကျိုးစားကြရင်းနဲ့ ကျမ်းစာတွေကလဲ ဖောင်းပွလာပြန်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာက ပိဋကတ်သုံးပုံကို အခြေခံတယ်။ ပိဋကတ်သုံးပုံကို သက်သေပြုတယ်။
ခရစ်ယာန်က သမ္မာကျမ်းစာကို အခြေခံတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကို သက်သေပြုတယ်။
အစ္စလာမ်က ကိုရမ်ကျမ်းကို အခြေခံတယ်။ ကိုရမ်ကျမ်းကို သက်သေပြုတယ်။
ဟိန္ဒူက ဝေဒကျမ်း ဥပနိသျကျမ်းကို အခြေခံတယ်။ အဲဒီကျမ်းတွေကို သက်သေပြုတယ်။
ဘာသာရေးတွေဟာ ကျမ်းစာကို အခြေခံ.. ကျမ်းစာနဲ့ကိုက်မကိုက် ဆုံးဖြတ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာတော့ .. သိပံစတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကတော့ လက်တွေ့ကို အခြေခံကြပါတယ်။ လက်တွေ့ကို သက်သေပြုကြတယ်။
ဘာသာကြီးလေးခုကို ဆုံမှတ်တွေကနေ ရပ်ပြချင်ပါတယ်။
ဘုရားဆိုတဲ့ ဆုံမှတ်ကနေ ရပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်..
ဗုဒ္ဒဘာသာက.. လူသားဘုရား.. လူသားပီသစွာ သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့တယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဘုရားက… ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရား.. ကယ်တင်ရှင်ဘုရား။
အစ္စလာန်ဘာသာရဲ့ ဘုရားလဲ .. ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားပဲ။ ကယ်တင်ရှင်ဘုရား
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ ဘုရားလဲ ဖန်ဆင်းရှင် တန်ခိုးရှင် ဘုရားပါပဲ။
နောက် ၀ါဒဆိုတဲ့ လမ်းဆုံ.. ဆုံမှတ်ကနေ ရပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်…
ဗုဒ္ဒ၀ါဒက.. ကမ္မ၀ါဒ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဝါဒ။ ကိုယ့်ကိုကို အားကိုးရတဲ့ ၀ါဒ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ဝါဒက.. ကယ်တင်ရှင်ဝါဒ. ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ.. ကယ်တင်ခံရဖို့.. ကယ်တင်ခံရချင်လို့..
အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ဝါဒလဲ.. ကယ်တင်ရှင်ဝါဒ.. ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒ.. ကယ်တင်ခံရဖို့.. ကယ်တင် ခံရချင်လို့..
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ ၀ါဒလဲ ..အတိတ်ကံနဲ့ ဗြဟ္မာဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပဲ။
နောက် ဘာသာတွေရဲ့ အကျင့် အလုပ်ဆိုတဲ့ လမ်းဆုံက ကြည့်မယ်ဆိုရင်..
ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ အကျင့်က.. မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်တတ်=တွေးတတ်ဖို့= ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့=လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ဖို့=အသက်မွေးနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့= သတိရှိဖို့=ကြိုးစားဖို့= စိတ်နဲ့ ဦးတည်ချက်တည်ငြိမ်ဖို့=ဆိုတဲ့ မဂ္ဂင်အကျင့်တွေကျင့်ရတယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ အကျင့်နဲ့ အလုပ်က… ဆုတောင်းတဲ့အလုပ်။
အစ္စလာန်ဘာသာရဲ့ အကျင့်နဲ့အလုပ်လဲ.. ဆုတောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲ။
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ အကျင့်နဲ့အလုပ်ကလဲ ဆုတောင်းတာနဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်တွေပါပဲ။
နောက် ရည်ရွယ်ချက် ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ လမ်းဆုံက ကြည့်မယ်ဆိုရင်..
ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ ပန်းတိုင်က.. ဆင်းရဲမှုမရှိရာ နိဗာန်။ ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ ပန်းတိုင်က.. ကောင်းကင်ဘုံ။
အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ ပန်းတိုင်ကလဲ ကောင်းကင်ဘုံပါပဲ။
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ ပန်းတိုင်ကလဲ.. ဗြဟ္မာကြီးနဲ့အတူ ပြန်လည်ရှင်သန်ဖို့ပါပဲ
နောက် အနှစ်သာရဆိုတဲ့ ဆုံမှတ်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်…
ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရက.. သစ္စာလေးပါးပါပဲ ။ ဆင်းရဲတယ်။ ဘာကြောင်းဆင်းရဲတယ်။ ဆင်းရဲချုပ်တဲ့နေရာ။ အဲဒီနေရာရောက်ဖို့အကျင့်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရပါပဲ။ နောက် ကံနဲ့ ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ . ကမ္မဿကတာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမြင်ရှိဖို့။ ဒါအဓိကပဲ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရက… သူတို့ဘုရားသခင်.. ထာဝရ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့… ကောင်းတာတွေ ဘာတွေ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ရင်.. ကောင်းကင်ဘုံကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။
အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရလဲ …. သူတို့ဘုရားသခင် အလ္လာ အရှင်ကို ယုံကြည်ဖို့ပါပဲ။ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ရင်တော့ ကောင်းတာတွေ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ကောင်းကင်ဘုံ ရောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရကလဲ.. ဗြဟ္မာ ဗိဿနိုး သျီဝ ယုံကြည်ပြီး ယောဂအကျင့်တွေကျင့်ဖို့ပါပဲ။
ဘယ်ဆုံမှတ်ကနေကြည်ကြည့် မတူညီကြပါဘူး။ အားလုံးယုံကြည်မှုနဲ့ ချည်းပါပဲ။ အခုဆိုရင် ဗုဒ္ဒဘာသာတောင် ယုံကြည်မှုဘက်ကို အားသန်လာသလို.. ဆုတောင်းမှုတွေကိုလဲ အားပြုနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာဟာ ယုံကြည်မှုကို အခြေမခံပါဘူး။ သိမြင်မှုကို အခြေခံပါတယ်။ ဆုတောင်းမှုကို အဓိကမပြုပါဘူး.. ကျင့်ကြံမှုကို အဓိက ပြုပါတယ်။ ဒါက ဗုဒ္ဒဘာသာတွေ သိစေချင်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
ဒီဘာသာကြီးတွေရဲ့ တူညီတဲ့ ဆုံမှတ်က တော့ တစ်ခုတည်းပါပဲ။ အဲဒါက တော့ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ ဗုဒ္ဒဘာသာပေါ်ပေါက်လာ ရတာလဲ.. လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ..ပေါ်ပေါက်လာတာလဲ လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့။ အစ္စလာမ် ဘာသာပေါ်ပေါက်လာတာကလဲ လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့။ ဟိန္ဒူ ဘာသာပေါ်ပေါက်လာတာကလဲ လူသားတွေငြိမ်းချမ်းဖို့ပါပဲ။
ဘယ်ဘာသာမှ လူသားတွေပူလောင်ဖို့.. လူသားတွေ ဆင်းရဲဖို့ ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီတော့ လူသားတွေ ငြိမ်းချမ်းဖို့.. ချမ်းသာဖို့.. တိုးတက်ဖို့.. အတွက် ပေါ်လာတဲ့ ဘာသာကြီးတွေကို နိုင်ငံရေးအတွက် အသုံးမချကြပါနဲ့။ စီးပွားရေး အတွက် အသုံးမချကြပါနဲ့။ လူမျိုးရေးအတွက် အသုံးမချကြပါနဲ့။
တချို့က နိုင်ငံရေးအတွက် ဘာသာရေးကို အသုံးချနေကြပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့သပ်လျှိုနေကြပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ သွေးခွဲနေကြတယ်။ တချို့က စီးပွားရေးအတွက် ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စားနေကြပါတယ်။ ဘာသာရေးကို ဗန်းပြပြီး အလှူခံဋ္ဌာနတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်စားနေကြပါတယ်။ အချို့က ဘာသာကိုလူမျိုးရေးအတွက် အသုံးချနေကြပါတယ်။ လူမျိုးပြန့်ပွားရေး.. လူမျိုးတစ်စု ကောင်းစားရေးအတွက် ဘာသာရေးကို အသုံးချနေကြပါတယ်။
ကျွန်တော် မောင်ပေကတော့ ဟောဒီဂေဇက်ရွာကြီးကနေ ကမ္ဘာသိအောင် ဒီနေ့ ဒီနေရာကနေ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လူသားများငြိမ်းချမ်းဖို့ ပေါ်လာတဲ့ ဘာသာတရားများကို နိုင်ငံရေးအတွက် အသုံးမချကြပါနဲ့။ စီးပွားရေးအတွက် အသုံးမချကြပါနဲ့။ လူမျိုးအတွက် အသုံးအချကြပါနဲ့။ လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက် ကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ခုက ဘာသာတိုင်းဟာ ယုံကြည်မှုအပေါ် တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တော့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုပဲ အမှန်လုပ်ပြီး သူများယုံကြည်ရာကိုတော့ အမှားလုပ်ကြတာဟာ လမ်းပြသူက မျက်စိမမြင်တာနဲ့ဘာမှ မထူးပါဘူး။ ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ မှန်သမျှ ဘယ်အရာကိုမှလဲ သက်သေဆိုတာ ပြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို သက်သေပြမရနိုင်သမျှ ပေါင်းဆုံမှုဆိုတာလဲ ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို မပေါင်းဆုံနိုင်သမျှ.. ပဋိပက္ခဆိုတာရှိနေပြီး ဆင်းရဲနေကြဦးမှာပါပဲ။
တကယ်လို့များ… အဲဒီယုံကြည်မှုဆိုတာတွေကို ဘေးဖယ်ထား ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ နိဗာန်ဆိုတာ ခဏဖယ်။ လူသားတိုင်းလက် ခံနိုင်တဲ့… လူ့လောက ကို ငြိမ်းချမ်းစေမယ့် လူ့အခြေခံ လူ့စည်းကမ်း လူ့ကျင့်ဝတ်တွေကို အခြေခံ ဥပဒေဆွဲသလို ဆွဲပြီး လူသားဥပဒေတရပ် ချမှတ်နိုင်လျှင် သိပ်ကောင်းမှာလို့ ကျွန်တော်တို့ခံယူမိပါတယ်။
ဥပမာ… လူ့အသက်သတ်တာဟာ လူသားလောကကို မငြိမ်းချမ်းစေပါဘူး။ ဒါကြောင့် လူ့အသက်မသတ်ရ။ လူ့ဥစ္စာ ခိုးယူမှုဟာလဲ လူသားလောက မငြိမ်းချမ်းစေတဲ့ အတွက် လူ့ဥစ္စာမခိုးရ.. ဆိုတာမျိုး လူသားဥပဒေတရပ်ကို ချမှတ်နိုင်ရင်… ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဝင်များ အားလုံး သိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ သူကြီးခိုင်နဲ့တကွ ရပ်မိ ရပ်ဖများအားလုံး ပြိုင်ပွဲဝင်များအားလုံးအတွက် စည်းကမ်းချက် ၆=ချက် သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ စည်းကမ်းချက် ၆=ချက်နဲ့ညီမှသာ လျှင် စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီးပြောဆိုခွင့်ပေးပါမယ်။ အဲဒီ စည်းကမ်းချက် ၆=ချက်နဲ့ညီတဲ့ စကားများကိုသာ ပြောဆိုခွင့်ပေးပါမယ်။ ဒီမူ ၆=ချက်နဲ့ မကိုက်ညီဘူး။။ ကိုက်ညီအောင် မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင် လုံးဝ စင်ပေါ်တက် စကားပြောခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ.. ကိုယ်ထင်ရာ ကိုပြောပြီး တဖက်လူယုံကြည်ရာကို ပုတ်ခတ်နေမယ်ဆိုရင် ကောင်းကျိုးမထွက်ပဲ ဒီပွဲဟာ ဆိုးကျိုးတွေပဲ ထွက်လာမှာမို့ခုလို စည်းကမ်းချက် များသတ်မှတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက်ရွာကြီးရဲ့ စည်းကမ်း.. ယဉ်ကျေးမှုတွေကို လေးစားသောအားဖြင့် ဒီစမ်းချက်တွေကိုနားလည်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
စည်းကမ်းချက် ၆=ချက်ကို ကြေညာပါမယ်။ အားလုံးသေချာစွာနား ထောင်ကြပါ။ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ လက်ထဲကိုလဲ ဒီစည်းကမ်းချက် ၆=ချက်ပါ စာတမ်းများကို ဝေပြီးပါပြီ။ အားလုံးနားထောင်ပေးကြပါ။
၁= လူတွေကို ကောင်းကျိုးရမယ့် ကောင်းတဲ့စကားများကိုပြောဆိုရမည်။
၂=ပြောသူကိုယ်တိုင် သိနိုင်တဲ့စကား.. သိလို့ရတဲ့စကားကိုသာ ပြောဆိုရ မည်။(ကိုယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ မပြောရ)
၃=အခုကျင့်ရင် အခုအကျိုးပြနိုင်တဲ့ စကားများသာ ပြောဆိုရမည်။ လက်တွေ့ အကျိုးပြမရတဲ့ စကား မပြောရ။
၄=ဟောဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာများကိုသာပြောရမည်။
၅=လူကျင့်နိုင်တဲ့ … လူအလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျင့်လို့ရတဲ့… အဲဒီအကျင့်တွေကို ကျင့်လို့ လူ့လုပ်ငန်းတွေ မပျက်စေနိုင်တဲ့.. လူဆောင်ထားနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာများကိုသာပြောဆိုရမည်။
၆=လူနားလည်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ လူနားလည်နိုင်တဲ့ စကားလုံးတွေကိုသာ ပြောဆိုရမည်။
အထူးသတိပေးချက် ဒီမူစည်းကမ်း ၆=ချက်နဲ့ မကိုက်ညီပါက စင်ပေါ်ကို လုံးဝမတက်ခဲ့ကြပါရန်.. အထူးသတိပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖျောင်းဖျောင်းဖျောင်း ဖျောင်း ဖျောင်း..
ဒါမှ ဒို့သူကြီးနဲ့ ဦးပေကွ….ရွှီ..ရွှီ..ရွှီး..
ဘယ်ဆီက ထွက်လာမှန်းမသိသော အရက်နံ့လေးနဲ့ အသံတသံ။
ဂျူး..။ ခရစ်ယန်မှာ..Ten Commandments ဆိုတာရှိတယ်..
ဒါကို.. ကိုင်ပြောမှရမှာမို့.. ပေးထားတဲ့.. မူစည်းကမ်း ၆ချက်နဲ့ မကိုက်ညီပါကြောင်း.. :?
ကောင်း၏ ။ သို့သော် မကောင်း။
စင်အောက် လက်ခုတ်တီးရမည့် သူတွေသာ ရှိပါတော့မည်။
ဖျောင်းဖျောင်း ဖျောင်းဖျောင်း ..
ကောင်းမွန်လှတဲ့ ပိုစ့် တစ်ခုပါ
အူးဘဇင်း ရဲ့စည်းကမ်၆ချက်ကို သာ ဂေဇက်မှာ ပြဌာန်းနိုင်ခဲ့ မယ် ဆိုရင် ပိုကောင်းလာမှာပေါ့နော် ဖလာ့
မကိုက်ညီလျှင်တော့ လုံးဝ ပြောခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ ဗုဒ္ဒဘာသာဆိုပြီးလဲ အခွင့်ထူးမပေးပါ။ ခရစ်ယာန် အစ္စလာမ် ဘယ်သူ့ကိုမှ အခွင့်ထူးမပေးပါခင်ဗျာ။ ဒီမူ ၆=ချက်နဲ့မကိုက်ရင်တော့ ပြောခွင့်ကိုမပေးပါ။
တနာရီကြာတဲ့အထိဖြင့် ဘယ်ဘာသာကမှ စင်ပေါ်ကိုရောက်မလာသေးကြောင်း ကြားသိရပါတယ်ဂျောင်း။
ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးတွေကို မဖတ်ပါဘူးဆိုမှ ၀င်ဝင်ဖတ်မိနေတော့လဲ ဟီးးးးးးးး
စည်းကမ်း(၆)ချက်လုံးကို ဘယ်သူသဘောမတူတူ အနော်သဘောတူပါ၏။း)
မိုးတိမ်ရဲ့ အားပေးမှုလေး ရလိုက်တာ အားတွေကို တကယ်ရှိသွားတာပဲ။
အချင်းချင်းဖို့ တအားကို ဖက်ပြီး မွှေးပစ်လိုက်ချင်တယ်။ အားတွေ များလာလို့ပါ။ ကျေးဇူးပဲ ကိုမိုးတိမ်။
သာသနာရေး ၀န်ဂျီး ရာထူးက ဆင်းဗျာ
အူးဘဇင်းကိုကိုဇောက်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သာသနာရေး ၀န်ကြီးခန့် ပလိုက်ပြီ
သာသနာရေး ၀န်ကလေး ဗိုက်ကလေး..
ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင် says:
ပြောချင်တာတွေသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခွင့်ရရင်လဲ
လက်ညောင်းရုံသာ အဖတ်ထ် တင်မယ် ။
ဆိုတာရှိတယ်ဗျ၊သူလဲထာဝရဘုရားပါဘဲ၊ဗုဒ္ဒ၀ါဒက.. ကမ္မ၀ါဒ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အတိုင်း ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဝါဒ။ ကိုယ့်ကိုကို အားကိုးရတဲ့ ၀ါဒ။ဒါလဲမှားတာပါဘဲ ၊အတိတ်ကံဆိုတာရှိသဗျ၊ကိုယ်မလုပ်ဘဲရနေတာတွေ
ကျင့်ကြံအားထုတ်တာလဲရှိတယ်၊ မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်တတ်=တွေးတတ်ဖို့= ပြောတတ်ဆိုတတ်ဖို့=လုပ်တတ်ကိုင်တတ်ဖို့=အသက်မွေးနေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့= သတိရှိဖို့=ကြိုးစားဖို့= စိတ်နဲ့ ဦးတည်ချက်တည်ငြိမ်ဖို့ဒါတွေလဲဘာသာတိုင်းမှာရှိတာပေါ့ဗျာ
ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ အကျင့်နဲ့အလုပ်ကလဲ ဆုတောင်းတာနဲ့ ယောဂကျင့်စဉ်တွေပါပဲ။အဲဒီနေရာရောက်ဖို့အကျင့်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရပါပဲ။ နောက် ကံနဲ့ ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်တဲ့ . ကမ္မဿကတာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမြင်ရှိဖို့။ ဒါအဓိကပဲ။
ဦးဗိုက်. ဦးဗိုက်ပြောတဲ့ အခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အရေးအခင်းတွေအတွက်လဲ အထိုက်အလျှောက်တော့ ကျေးဇူးပြုမယ်ထင်ပါတယ်နော်။
.mical chan ခင်ဗျာ.. ကျွန်တော်စာစုလေးကို ၀င်ရောက်အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ ကျွန်တော်သိသလောက်လေးပြောရရင်.. ဗုဒ္ဒဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တွေ ထဲမှာ အသင်္ခတ ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုမတွေ့ဖူးပါဘူးခင်ဗျာ။ နိဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ထဲမှာတော့ တွေ့ဖူးပါတယ်။ နောက် ဗုဒ္ဒဘုရားဟာ ထေရ၀ါဒ အရ ထာဝရ မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အားလုံးအနတ္တလို့ လက္ခံကြလို့ပါပဲ။
လေတို့ ..ရေတို့. ပါးစပ်ပေါက်တို့ဆိုတာ ထာဝရ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတာ.. သူ့ဘာသာ သူ့အယူအဆအရ ကျွန်တော်ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒါတွေက သူ့ဘာသာရဲ့ယုံကြည်မှုပါ။ ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလို ယုံကြည်သူတွေ ရှိသလို …. မယုံကြည်သူတွေလဲ ရှိမှာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်အနေနဲ့က အမှားအမှန်ကို ဝေဘန်သုံးသပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ မတူညီမှုလေးတွေနဲ့ တူညီမှုလေးတွေထုတ်ပြတာ သက်သက်ပါ။
ဗုဒ္ဒဘာသာမှာလဲ.. သတ္တလောက.. သင်္ခါရလောက.. သြကာသလောက ဆိုတာ ဘုရားဟောတဲ့ လောကမဟုတ်ဘူး။ ဟိန္ဒူကလာတဲ့ လောကသုံးပါပါ။ ဗုဒ္ဒဟောတဲ့ လောကသုံးပါးက ကာမလောက။ ရူပလောက။ အရူပလောက ဆိုပြီးလဲ ပြောသူတွေကြောင့် ကြားဖူးတွေ့ဖူးပါတယ်ခင်ဗျ။ လောက သုံးပါးကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာ သတ္တသင်္ခါသြကာသ ဆိုတဲ့လောကသုံးပါးကလွတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကာမ.. ရူပ.. အရူပ.. ဆိုတဲ့လောကသုံးပါးကလွတ်ဖို့လို့ယူဆပါတယ်။
မှန်မှန်ကန်ကန် မြင်တတ် တွေးတတ်ဖို့…ဆိုတဲ့ အကျင့်ရှစ်ချက်ကတော့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို လူအနားလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်ဆိုလိုက်တာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဒဘာသာမှ တပါး အခြားဘာသာတွေမှာ အဲဒီလို သီးသီးသန့်သန့် မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးဆိုတာ ကျွန်တော်မတွေ့ဖူး.. မကြားဖူးလို့ပါခင်ဗျာ။ အခြားဘာသာတွေမှာ အဲဒီလိုမဂ္ဂင်အကျင့်တွေရှိတယ်လို့သိရရင် ၀မ်းသာ စရာပါပဲခင်ဗျ။
ဗုဒ္ဒဘာသာဟာ ဆုတောင်းတဲ့ဘာသာ မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ဆုတောင်းတွေ.. ဆုပေးတွေလဲ ကျင့်သုံးနေကြတာတွေ တော့ တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
နောက်ဆုံးမှာ တူညီသွားမယ့်အချက်တွေလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာသာတိုင်းက အတူအညီလက်ခံယုံကြည်ကြသေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်တင်ပြဖို့လဲ အခက်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်သိတာကတော့ လူကျင့်ဝတ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့.. လူသားကို အကျိုးမများနိုင်တဲ့ အကျင့်နဲ့လမ်းစဉ်တွေဟာ သူ့ဘာသာ ကွယ်ပျောက်ပြီး
သွားမှာလို့ပဲ မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒီလိုနဲ့အားလုံးတူညီနိုင်မလားလဲ စဉ်းစားမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီစာစုလေးတင်ရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တော့ ဘာသာတိုင်းဟာ လူသား အားလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ဆိုတာကိုအဓိက သိစေချင်တာပါခင်ဗျာ။ မတူညီမှုလေးတွေကို ထုတ်ပြခဲ့ပြီး တူညီမှုကို နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ချင်လို့ တင်ပြတာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ ဘာသာလွတ်တစ်ဦးအနေနဲ့ပဲ ရေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကွန်မန့်တွေနဲ့ အခြားအတိုက်အခံတွေကို မေးခဲ့ဖူးတဲ့ (နောက်ဆုံးသာဝက ကို ဘုရားက
ဘယ်သူမှပြန်မပြောနှိုင်ပါ။အခု ဆရာဖြေတာ အဲဒါပါဘဲ။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး ဘယ်မှာမှမရှိပါ။ထပ်ပြောရရင် ထေရ၀ါဒစစ်စစ်မှာ သံဃာရတနာ တင်ထားပြီး
လူသားဘုရား စစ်စစ်ရဲ့ ပြောကြားချက်များကို ပါဠိလို တရားဝင်ရေးထားပါတယ်။
မသိပဲ လျှေက်မရေးပါနဲ့။mical chan ခင်ဗျားမှားနေပြီဗျ။ပါဠိဘာသာသင်ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေ ခုချိန်ထိရှိပါသေးတယ်။အရိမေတ္တယျမြတ်စွာဘုရားက အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ 
သာသနာကွယ်ပြီးမှပေါ်နှိုင်မှာပါ။တစ်ချိန်တည်း ဘုရား(အစစ်)သာသနာ နှစ်ခုမပေါ်နှိုင်ပါဘူး။
ဒီတော့ ပေါင်းစည်းလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲ လုံးဝ မြတ်စွာဘုရားမဟောခဲ့ရပါ။
ဗိုလ်ချူပ်ပြောခဲ့သလို သောက်ကျင့်တွေ ပြင်ကြပါ။ သေချာစဉ်းစားပြီးမှ ရေးကြပါ၊ ဝေလေလေနဲ့ ထင်ရာတွေကိုပြော ထင်ရာတွေကိုရေး နေရင် တိုင်းပြည်အတွက် အမှိုက်တွေပါ။ ဒို့ဗိုလ်ချူပ်ကိုလည်း မုဒိန်းကောင်တွေခေါ်လါတယ်ဆိုပြီး သောက်ရူးတွေ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် အာဇာနည် တွေထဲမှာ အားလုံးပါကြပါတယ် သတိရကြမှာပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန်အတွက် လက်တွေလိုနေတာပါ၊ ပါးစပ်တွေမဟုက်ပါဘူးကွာ။ ၈နစ်ရှိပြီ ငါစောင့်နေပါတယ်။
မည်သည့်ဘာသာမဆို မျက်လုံးမှိတ်ပြီး မကိုးကွယ်ပါနှင့်ဘာသာဆိုတာ ယုံကြည်ချက်နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် ဘာသာပြောင်းတိုင်း လူမျိုးပြောင်းသွားတယ်လို့ထင်နေသမျှ ဒို့ဗမာတွေအလိမ်ခံနေရမှာပါ။ (BURMA =MYANMAR)
သမိုင်းကြောင်းကိုပြောရင် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးစစ်ရဲ့လါး ရှက်ရပါတယ်၊ အရီးကြီးခေတ်လေ……………..ဒို့ဗမာတွေ ဘယ်လောက်ပြုပြင်နိုင်မှာလည်းတော့ မသိပါဘူး၊အသိနှင့် လုပ်ရပ်တွေလွဲနေပါတယ်၊
ရီစရာမဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကို မတော်တဆ တိုက်မိခဲ့လျှင် နိုင်ငံခြားသားက ဆောရီးတဲ့၊ ဗမာက မင်းဘာကောင်လည်းဆိုပြီ ရန်ဖြစ်ကြတယ်၊ နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက်ကို အရမ်းလှတယ်လို့ ပြောလျှင် နိုင်ငံခြားသူက သိုင်းကျုးတဲ့၊ ဗမာသူက ပါးကျိုးမယ်၊ ဟိုဟာစားတဲ့လေ……….သြော် ဒို့ဗမာတွေ ရှက်စရာကြီးကွာ။
လူသားအကျိူးပြုဂီတဥယျာဉ် (၀၉၅၀ ၈၂၈၀၈) တာမွေလူမိုက်ကြီး ၀င်းကိုလှိုင်
တားတားကို အရမ်းလန်းဒယ်လို့ ပြောကြည့်ပါလား..
လာ…ဘီအီး လိုက်တိုက်ပါရစေလို့ တောင် ကြန်ကြောလိုက်ဦးမယ်..
ကိုmical chan ရေ……..
မြတ်စွာဘုရားကတော့ (၆) နှစ်ကို ဘယ်လိုကျင့်ကြံခဲ့ရတုန်းစာဖတ်တတ်သူတိုင်းသိမှာပါ။
ကျန်တဲ့ ဘုရားတွေကတော့ ဘယ်လို ကျင့်ကြံအားထုတ်လို့ ဘုရားဖြစ်ရသလဲ ကျွန်တော်မသိပါ။
ဆက်..ဆက်.. ဆက်ပါဗျို့ .. ဖတ်လို့ အလွန် ကောင်း … အထူးကောင်းကြောင်းပါ .. Plus တွေ များကြီး ပေးချင်သော်လည်း . ပေးမရ၍ .. ment လိုက်ကြောင်း ..
Mical Chan ပြောသမျှခင်ဗျားခံနေရပါလား
အနတ်တ လက္မဏသုတ်မှာ (မှတ်ချက်-သိုင်းကျမ်းမဟုတ်ပါ)
ဒိကောင့်ကို ကောင်းကောင်းဖဲ့နိုင်တဲ့ သိုင်းကွက်တွေရှိတယ်ဗျ။
ထာဝရ ဘုရားသခင်ကို ခင်ဗျားတွေရင် မေးကြည့်စမ်းပါဗျာ
“အသင်ဟာ အသင်မ၍ မရနိုင်သော ကျောက်တုံးကြိးကို ဖန်ဆင်း
နိုင်ပါမည်လော” လို့မေးကြည့် ပြိးရင်သူပေးတဲ့ အဖြေကိုနားထောင်
ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒဆိုတာ ဘာလဲလို့ ခင်ဗျားသိသွားလိမ့်မယ်။